Shiilki diyaaradeed ee dhacay iyo aqoonta duuliyeyaasha maxaa xidhiidh oo ka dhaxeeya? – Xeernews24
Shiilki diyaaradeed ee dhacay iyo aqoonta duuliyeyaasha maxaa xidhiidh oo ka dhaxeeya?
23. März 2019 /in WARAR/NEWS /von admin
Diyaarad Boeing 737 MAX 8 oo ay leedahay shirkadda diyaaradaha Itoobiya
Baadhitaanka dheer shilkii diyaaradeed ee ku dhacay diyaarad ay lahayd shirkadda diyaaradaha Itoobiya oo weli socda, haddana waxaa soo baxaya warar sheegaya iney aqoonta duuliyeyaasha oo yared ay sababtay shilki diyaaradeed.
Wararka ay baahinayaan warbaahinta caalamka qaarkood waxay shirkadda diyaaradaha Itoobiya ay ku abuurtay cadho iyada oo sheegtay inuu warkaasi been abuur cad yahay oo waxba ka jirin.
“waxayna sheegeen duuliyaha diyaaradda waday iney u hadhsaneyd tababarka duulimaadka koombiyuutarka (simulator) lagu qaato si diyaarad cusub markay timaaddo uu duuliyaha ula sii qabsado uusan qaadan.
Maareeyaha guud ee shirlkadda diyaaradah Itoobiya oo ku sugan goobta ay diyaaradda ku burburtay
“Duuliyeyaasha shirkadaha waaweyn ee Mareykanka markay duuliya ka noqonayaan diyaaradda Boeing 737 Max 8 waxay tababar hal saac ay ku qaataan Ipad, marka iney caddahay iney ujeddadu tahay khaladka Boeing in dusha laga saaro shirkadda diyaaradaha Itoobiya” ayey tidhi shirkadda diyaaradaha Itoobiya.
https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2018/08/Ethiopian-airline.jpg 156 323 admin https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/xeernews-1.png admin2019-03-23 06:53:172019-03-23 06:53:17Shiilki diyaaradeed ee dhacay iyo aqoonta duuliyeyaasha maxaa xidhiidh oo ka dhaxeeya?
Kenya oo wada-hadalladii Soomaalia ka quusatay iyo khubaro Shiiinees ah oo la... Gobanima-doon Cumar Cilmi Khayreh oo RPP kabaha la dul maray